Zoma Mainty: 4 andro any Malta amin'ny vidiny mora indrindra | Vaovao momba ny dia
Herintaona indray, ny andro Zoma Mainty efa eto io. Marina fa lazaina amintsika foana fa tsy maintsy mividy amin'ny loha. Fa ny marina dia amin'ity taona ity, hampiasa vola amin'ny dia tsara isika. Iray tahaka ilay arosonay anio ary azo antoka fa tsy afaka mandà ianao. Momba izany efatra andro any Malta ho an'ny kely noho ny noeritreretinao.
Amin'io tolotra io ihany ny tapakilan'ny fiaramanidina ary mijanona. Angamba ny fahafantarana an'io, ireo tarehimarika sy isa avo dia manomboka manidina amin'ny lohanao. Ho hitanao fa amin'ny farany, dia hahagaga anao. Tsy maintsy manao ny famandrihanao haingana araka izay tratra ianao, saingy afaka milamina tsara ny valizinao satria tsy hivoaka mandritra ny volana vitsivitsy izahay. Jereo!
1 Zoma mainty, sidina miampy efatra alina any Malta
2 Inona no ho hita any Malta
2.1 Tanàna ilaina hitsidika
2.2 Nosy sy morontsiraka
2.3 Tempolin'i Malta
Zoma mainty, sidina miampy efatra alina any Malta
Betsaka ny toerana itodihana antsika. Ny sasany amintsika dia nitsidika azy ireo mihoatra ny indray mandeha satria namela tsiro tena tsara teo am-bavantsika izy ireo ary avy eo misy hafa, izay henontsika fa mikorontana saingy mbola tsy nanao ilay dingana izahay. Noho izany, anio dia manolo-kevitra ny hanome izany ho anao izahay miaraka amin'ity tolotra lehibe ity. Handeha isika mitsidika an'i Malta!.
Hanana telo andro mahery kely hahafahantsika mitsidika ity toerana ity. Hiainga ao Madrid ny sidina miaraka amin'ny orinasa Ryanair. Saingy araka ny nambaranay, na dia efa misy aza ny tolotra ankehitriny, dia kasaina ho amin'ny Mey 2019 ny dia. Na dia toa lavitra aza izany, dia fantatray fa handalo haingana dia haingana ireo volana. Ka tsy maharary ny mandeha manao famandrihana zoma mainty anay. Manomboka amin'ny Alarobia ka hatramin'ny Alahady dia afaka mahita ny tsiambaratelo lehibe momba an'io vatosoa itodiana io isika.
Tsy mila mamandrika ny sidina amin'ny lafiny iray intsony ianao ary ny trano fandraisam-bahiny amin'ny lafiny iray satria hoy izahay, ny tolotra dia misy ny faritra roa amin'ny tanàna taloha. Ny trano fandraisam-bahiny dia ny 'Sliema Chalet' izay eo anoloan'ny morontsiraka no misy azy. Tena akaiky ianao, fifandraisana tsara amin'ny fitaterana ary koa, ny toerana dia voahodidin'ny iray amin'ireo fialamboly manan-danja indrindra, izay ahitanao fivarotana sy bara na ivon-toeram-pivarotana 200 metatra miala eo. Avy amin'izay azontsika lazaina fa 0,2 kilometatra monja avy eo afovoan-tanàna ity hotely ity. Raha efa nanapa-kevitra ianao dia hanana ity tolotra ity Lastminute.com.
Inona no ho hita any Malta
Ao afovoan'i Mediterane sy atsimon'i Italia dia hihaona amin'i Malta isika. Io no iray amin'ireo toerana malaza indrindra ho an'ny mpizahatany, noho izany, tsy azontsika hadino ity tolotra ity, mba hahatanteraka ny nofinofy. Inona no azoko tsidihina any Malta? Manana hevi-dehibe tsy misy fiafarana izy ireo, izay manandanja indrindra no resahanay.
Tanàna ilaina hitsidika
Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia 'La Valletta'. Tanàna baroque izy io, izay misy manda, ary koa rindrina vato izay mamerina antsika amin'ny fotoana taloha. Manana fomban-drazana sy tantara lava ao ambadik'izany. Zavatra izay ho hita noho ny lapany na ny fiangonany. Tanàna iray hafa hodinihina dia 'Mdina', izay manana rindrina medieval izay nofidian'i 'Game of thrones' mba ho isan'ny scenario-n'izy ireo. Manodidina ny 13 kilometatra atsimo no ahitantsika ny 'Marsaxlokk'.
Io no seranan-tsambo manan-danja indrindra amin'ny faritra. Ho hitanao eo ny fomba fanoloran'ireo sambo hazo kitapo manokana noho ny lokon'izy ireo. 'Rabat' dia tanàna iray izay natsangan'ny Arabo, izay ahafahanao mitsidika ireo catacombs. Rehefa miresaka momba izany isika 'The Cottonera' Izahay dia manao izany avy amin'ny andiany 'Vittoriosa', 'Senglea' ary 'Copiscua'. Aiza ianao tsy afaka manadino ireo ody mahafinaritra nafeniny.
Nosy sy morontsiraka
Ny fitsangatsanganana amin'ny morontsirak'i Malta dia nofinofy. Voalaza momba azy ireo fa izy ireo dia iray amin'ireo firavaka lehibe ao amin'ny Ranomasina Mediterane, noho izany dia ho teboka iray hafa koa ny kajikajiana. Ho fanampin'izay, afaka mitsidika ny 'nosy Gozo'. Na dia kely kokoa noho i Malta aza izy io dia manana tsangambato sy tempoly samihafa tsara tarehy. Etsy ankilany, manana ny 'nosy Comino' izay tena kely dia kely, fa mangina ary misy rano turquoise izay hahatonga anao ho tia.
Ao atsimon'ny nosy dia ho hitantsika ilay antsoina hoe 'Hagar Qim', izay iray amin'ireo tranainy indrindra nefa mbola tsara toetra. Tsy azontsika adino ny 'Tarxiem', karazana prehistorika sy ny 'Hypogeum' any ambanin'ny tany izany ary efa fitoerana masina. Azontsika atao ny mankafy izany rehetra izany noho ity tolotra Zoma Mainty ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Zoma Mainty: 4 andro any Malta amin'ny vidiny tsara indrindra
Van Camperized, hevitra tsara hivezivezena
Selva de Oza, natiora ary fizahan-tany